Jawaari & wafdi u socdaalay Uganda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Wefdi uu hogaaminayo guddoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa maanta u amba baxay dalka Uganda kaddib markii casuumaad uu ka heley dhigisa dalkaasi, Rebecca Alitwala.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo wafdiga uu hogaamiyo ayaa socdaalka ay ku tegayaan waxa uu qeyb ka yahay xoojinta xiriirka labada Baarlamaan u dhexeeya, iyadoo inta uu kusuganyahay dalka Uganda uu la kulmi dooni guddoomiyaha Baarlamaanka Uganda Kadaga iyo Madaxda kale ee dalkaasi.
Horay ayaa waxaa baarlamaanka Soomaaliya iyo baarlamaanka Uganda u dhxe maray heshiis iskaashi oo baarlamaanka Uganda ku caawinayo Soomaaliya, waxaan Muqdisho horay u timid xubno ka tirsan baarlamaanka dalkaas.
Beyle oo la kulmay dhigiisa Shiinaha